"मधेशमा काँग्रेसको झण्डा मात्र बाँकी राख्नेकी, जनता पनि राख्ने"
२०७२ माघ २ शनिबार, मध्ये तराईका आठ जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केका नेपाली काँग्रेसका युवा नेताहरुको टोलीले शनिवार तीन शिर्ष नेताहरुलाई तराईको अवस्थाका बारेमा ब्रिफीङ गरेको छ। युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा रहेको ९ सदस्यीय टोलीले तराई मधेशको अध्ययन भ्रमणको प्रतिवेदन बुझाउदै शिर्ष नेताहरुलाई तराईको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको हो। पार्टीका सभापति सुशील कोईराला, बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाईएको प्रतिवेदनमा गत ... बाँकी अंश»
भोली सम्म लिखित सहमति गर्ने तीन दलको तयारी
२०७२ माघ २ शनिबार, काठमाडौं । प्रमुख तिन दलका नेताहरुले मधेशी मोर्चासंग भोली सम्ममा लिखित सहमति गर्ने तयारी गरेका छन् । मोर्चाका नेताहरुसंग बार्ता गर्न गठित कार्यदलका सदस्यहरु सहित तिन दलका शिर्ष नेताहरुको बैठकले भोली सम्ममा लिखित सहमति गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका नेताहरु कार्यदल तहमा भएको छलफलका आधारमा निचोडमा पुगीसकेका हुन् । उनीहरुले सहमतीका आधारहरु बारेमा भने सहमति भईसकेपछि म ... बाँकी अंश»
जुटे नेताहरु सहमतिको खाका बनाउन
२०७२ माघ २ शनिबार, काठमाडौं । मधेशी मोर्चासंगको बार्तालाई निर्णायक बनाउनेगरी प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताहरु छलफल जुटेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरु कार्यदल तहमा भएको छलफलका आधारमा निचोडमा पुग्ने बारेमा छलफलमा जुटेका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अहिले शिर्ष नेताहरुका विचमा छलफल भईरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिए । मधेसी मोर्चाले उठाएका ११ बुँदे मागहरु मध्ये कुन ... बाँकी अंश»
कांग्रेसमा प्रादेशिक संरचनाबारे बुढा र युवाबीच बाँझाबाँझ
२०७२ माघ १ शुक्रबार, काठमाडौं । कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झिन नपाउँदै अर्को विवाद सिर्जना भएको छ । पार्टीको प्रादेशिक संरचनामा कांग्रेसमा बाँझाबाँझ नै भएको छ । नयाँ संविधान अनुसार पार्टीको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीको विधान मस्यौदा समितिमा विवाद भएको हो । समिति विवाद सुल्झिन नसकेपछी समिति नेताहरुले शुक्रबार पदाधिकारीहरुसंग गुहार मागेका छन् । मस्यौदा समितिमा केही नेताहरुले प्रदेश सभापति केन्द्रीय सभापतिले मनोनित गर्ने र प्रदेश ... बाँकी अंश»
‘च्याखे नथाप्ने र दाउ नहान्ने’ शर्तमा फुटसल खुल्ला (के छ १५ बुँदेमा ?)
२०७२ माघ १ शुक्रबार, सामाजिक विकृति ल्याएको भन्दै तत्कालका लागि प्रतिबन्ध लागेका फुटसल संचालनका लागि १५ बुँदे सहमति भएको छ । प्रहरी–प्रशासन, दर्ता गर्ने निकाय र व्यवसायीबीच फुटसल संचालनका लागि १५ बुँदे माप दण्ड बनेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा शुक्रबार दिउँसभर भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो । छलफलका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराईको संयोजकत्वमा टोली बनेको थियो । टोलीको छलफलपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले १५ बुँदे घो ... बाँकी अंश»
राजेन्द्र महतोको भेट बदलियो, तत्काल नेपाल फर्केलान् ?
२०७२ माघ १ शुक्रबार, काठमाडौं । उपचारका दिल्ली गएका सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भेटघाटमा व्यस्त छन् । राजनीतिक भेटलाई तीब्रता दिएका महतोको भेटयात्रा बदलिएको छ । महतोले अब कुटनीतिक भेटघाट अघि सारेका छन् । शुक्रबार महतोले नेपाल मामलाका भारतीय जानकार प्रोफेसर एसडी मुनिसंग भेट गरेका छन् । भेटमा महतोले नेपालको नयाँ संविधान र मधेस आन्दोलनबारे ब्रिफ गरे । मुनिले मधेस समस्या र संविधानबारे चाँसो राखेका छन् । यसअघि महतोले राजनीतिक नेताहरु देखि सांसद सम्म भेट गरि ... बाँकी अंश»
‘थारुसंग पूर्व प्रधानमन्त्री’ विजयनगरको यादले सतायो
२०७२ माघ १ शुक्रबार, काठमाडौं । एकिकृत माओवादी पार्टी त्यागेर नयाँ शक्ति निर्माणको अभियानमा लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थारुको माघी महोत्सवमा देखिएका छन् । एमाओवादीमा हुँदा थारुलाई निकै पछ्याउने भट्टराई पार्टी त्याग पछि पनि थारु समुदायको माघी महोत्सवमा सरिक भएका हुन् । काठमाडौंको खुलामञ्मा सुरु भएको थारु राष्ट्रिय माघी महोत्सव उद्घाटन समारोहमा भट्टराई थारु नेता र मधेसी नेताका माझ देखिए । केही दिन अघि मात्रै भट्टराईलाई एमाओवादी अध्यक्ष पुष् ... बाँकी अंश»
कार्यदल बैठक फेरि अन्योलमा, ‘महरा फर्के, अन्य लुके’
२०७२ माघ १ शुक्रबार, काठमाडौं । सरकार र तीन दल तथा मधेसी मोर्चाको कार्यदलबीच शुक्रबार (आज) बस्ने भनिएको बैठक समेत अन्योलमा छ । विहिबार बस्नु पर्ने बैठक आन्तरिक छलफल भन्दै शुक्रबारलाई सरेकामा फेरि पनि बैठकबारे अन्योल देखिएको हो । विहिबार बालुवाटारमा बसेको शीर्ष तीन दल बैठकले कार्यदल छलफल अघि आन्तरिक छलफल गर्ने तय गरेको थियो । यद्यपि, कार्यदल सदस्यहरुले सुचना नचुहाउने रणनीति अनुसार आन्तरिक छलफल भइरहेको बताए पनि पार्टीको वा कार्यदलको भन्नेबारे खुलाएका छैनन् । कार ... बाँकी अंश»
फुटसल खोल्न प्रहरी सकारात्मक
२०७२ माघ १ शुक्रबार, काठमाडौं । प्रहरी र प्रशासनले काठमाडौंमा रहेका सबै फुटसल तत्कालका लागि बन्द गराएपछी खेल क्षेत्रलाई असर गर्ने कार्य नगर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ । प्रहरीले विहिबारबाट फुटसल तत्कालका लागि बन्द गराएको जानकारी गराएको थियो । प्रहरी–प्रशासनले स्थानीयको उजुरीकै अधारमा फुटसललाई निगरानीमा राखिएको बताएको छ । पछिल्लो समय काठमाडौंमा खेल अभ्यासका लागि फुटबल मैदानको अभाव भइरहेका बेला लोकप्रिय बन्दै गइरहेको फुटसललाई प्रतिबन्ध गर्नु सरकारी हस्तक्षेप हो, भ ... बाँकी अंश»
भोजनको संयोजक नै भोकहड्तालमा बसेपछि काँग्रेसमा अन्यौलता
२०७२ माघ १ शुक्रबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको आसन्न १३औं महाधिवेशनका लागि भोजन तथा आवासको व्यवस्थान गर्न भन्दै पार्टीले गठन गरेको भोजन तथा आवास व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु अहिले अन्यौलमा परेका छन् । भोजन तथा आवास समितिका संयोजक नै भोक हड्तालमा बसेपछि भोजनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका पार्टीका नेताहरु नै अन्यौलमा परेका हुन् । केन्द्रीय समितिद्धारा समितिका संयोजक तोकिएका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी पार्टीको क्रियाशिल सदस्यता संवन् ... बाँकी अंश»
यसरी मनाउनुस् माघे संक्रान्ती पर्व
२०७२ माघ १ शुक्रबार, काठमाडौँ । सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तरायण सुरु हुने भएकाले माघ १ गतेलाई मकर सङ्क्रान्ति भनिन्छ । माघ १ गतेबाटै उत्तरायण सुरु हुने भएकाले दिनभन्दा रात छोटा हुँदै जान्छन् । उत्तरायण सुरु हुने दिनको स्नान, जप, तप, ध्यान साधना, दान आदिलाई पुण्य दायक मानिन्छ । यसैले आजको दिन देवघाट, त्रिशूली, कालीगण्डकी, बाग्मती, इन्द्रावती, त्रिवेणी, रिडीलगायतका स्थानमा माघ स्नान गर्ने भक्तजनको भीड लाग्छ । यी स्थानमा आजका दिन भव्य मेलासमेत लाग्न ... बाँकी अंश»
सरकारले राजनीतिका सिफारिसका आधारमा मुद्दा फिर्ता गर्न नसक्ने सर्वोच्चको आदेश
२०७२ माघ १ शुक्रबार, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राजनीतिक दलको सिफारिसका आधारमा सरकारले गरेको मुद्दा फिर्ताको निर्णयलाई बदर गर्ने आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णय र सोसम्बन्धी कामकारबाही संविधान, प्रचलित कानुको व्यवस्था, अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर सिद्धान्त र मन ... बाँकी अंश»
फुटसल फण्डा : ‘जुवा घर जस्तै बनेपछि बन्द’
२०७२ पौष ३० बिहिबार, चन्द्र धामी, काठमाडौं । सीडीओ र एसएसपीको पहलमा काठमाडौंका फुटसल बन्द हुँदैछन् भन्ने सुइको पाउनासाथ सुरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीलाई फोन डायल गरियो । प्रजिअ सुवेदीले फुटसल सेन्टरहरुमा विद्यार्थीहरु स्कुलकै ड्रेसमा बिहान देखि साँझ सम्म देखिन थाले, लागुपदार्थ सेवन लगायत अपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको रिपोर्ट प्रहरीले म कहाँ गरेपछी तत्कालका लागि बन्द गराउने पहल गरियो–भने । ‘गेम्सको नाउँमा गेम्लिङ हुन थाल्यो’ । स्थानीयबाटै ‘ ... बाँकी अंश»
कार्यदल बैठक शुक्रबार, पहिलो बैठकपछि भागेका महरा अझै फर्केनन्
२०७२ पौष ३० बिहिबार, काठमाडौं । सरकार, तीनदल र मधेसी मोर्चा सम्मिलित कार्यदलको विहिबार डाकिएको बैठक बस्न सकेन । बैठक शुक्रबार सरेको छ । मंगलबारको बैठकमा सत्ताधारी तथा विपक्षी कार्यदल सदस्यले वुधबार शीर्ष नेतासंग छलफल गर्ने भनेकामा हुन सकेन । विहिबार निर्णय तहको वार्ता हुने उनीहरुले बताएका थिए । यद्यपि, विहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले उठाएका अधिकांश माग पूरा गर्ने जनाउ दिएको छ । मधेसी मोर्चाका मागको विष ... बाँकी अंश»
फुटसल बन्दको झोंकमा युवा फन्किए, ‘मनोमानी गरे’–सबैलाई बन्द गरायौं : एसएसपी थापा
२०७२ पौष ३० बिहिबार, चन्द्र धामी, काठमाडौं । प्रहरी र प्रशासनले काठमाडौंमा रहेका सबै फुटसल तत्कालका लागि बन्द गराएको छ । यद्यपि, प्रहरी प्रशासनको कदमप्रति स्थानीयले रोष पोखेका छन् । प्रहरीले स्थानीयको उजुरीकै अधारमा फुटसललाई निगरानीमा राखिएको बताएको छ । पछिल्लो समय काठमाडौंमा खेल अभ्यासका लागि फुटबल मैदानको अभाव भइरहेका बेला फुटसल व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको हस्तक्षेप हो, भन्ने टिप्पणीहरु सुरु भएका छन् । मैदान र अभ्यासको अभावले नेपाली फुटबल खस्किएक ... बाँकी अंश»
कांग्रेस जिल्ला सभापतिका लागि अमेरिकाबाट उम्मेद्वारी
२०७२ पौष ३० बिहिबार, डोटी । आसन्न १३ औं महाधिवेशनमा होमिएको कांग्रेसले पार्टी एकिकरण भएदेखि निरन्तर जिल्ला सभापति भएकाहरु सभापतिको उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि देशभर कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिमा तरंग सिर्जना गरेको छ । अघिल्लो पुस्तालाई बन्देज लागेपछी नयाँ आकांक्षीहरुको भीड लागेको छ । यति सम्म की, एउटै जिल्ला कार्यसमितिको सभापतिका लागि ६ जनासम्म आकांक्षी देखिएका छन् । जिल्ला कार्यसमिति सभापतिका लागि अमेरिकाबाट उम्मेद्वारी आउने विषयले डोटीमा झन् तरंग फ ... बाँकी अंश»
काठमाडौंका फुटसल एरेना प्रशासनले बन्द गराउँदै
२०७२ पौष ३० बिहिबार, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका भित्रका सबै फुटसल एरेना विहिबार (आज) बाट बन्द हुने भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन र प्रहरीको समन्वयमा फुटसल तत्कालका लागि बन्द हुन लागेको हो । फुटसल खेल्ने ठाउँमा अवाञ्छित गतिविधि बढेको गुनासो आएपछि तत्कालका लागि बन्द गर्न लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए । सुवेदीले हाम्राकुरासंग भने,‘विद्यार्थीहरु स्कुल जान छोडेर स्कुलको ड्रेस लगाएर फुटलमा देखिने गरेको, फुटसल खेल्ने ठाउँमा माद ... बाँकी अंश»
को को बन्न नपाउने भए काँग्रेसका जिल्ला सभापति
२०७२ पौष ३० बिहिबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र काँग्रेस प्रजातन्त्रीक पार्टी एकीकरण भएदेखि निरन्तर जिल्ला सभापति भएको व्यक्ति फेरी सभापति बन्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि काँग्रेसको जिल्ला नेतृत्वमा नयाँ व्यक्तिहरु आउने भएका छन् । काँग्रेसले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार १८ जिल्लाका जिल्ला सभापति अव फेरी सभापति बन्न नपाउने भएकाले नयाँ व्यक्तिहरु जिल्ला सभापति बन्ने भएका हुन् । नेपाली काँग्रेस र काँग्रेस प्रजातान्त्रीक विच एकिकरण भएपछि बनेको कार्यसम ... बाँकी अंश»
कक्षा ११ को नजिता आज प्रकाशित हुदै
२०७२ पौष ३० बिहिबार, काठमाडौं । उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा ११ को परिक्षाफल आज प्रकाशित गर्न लागेको छ । परिक्षाफल मंगलवार प्रकाशित गर्ने भनिएको भएपनि प्राविधिक समस्याका कारण केहीदिन ढिला गरी आज नतिजा प्रकाशित गर्न लागिएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्का सदस्य सचिव नारायण कोईरालाले परिक्षाफल प्रकाशित गर्न नयाँ सफ्वेरको प्रयोग गरिएकाले अपेक्षीत भन्दा बढी समय लागेको जानकारीदिनुभयो । उहाँले नयाँ सफ्वेरबाट नतिजा प्रकाशन, उपयोग र भण्डारणमा समेत धेरै राम ... बाँकी अंश»
कार्यदल सदस्यको भागा–भाग‍‍
२०७२ पौष २९ बुधबार, काठमाडौं । मधेस समस्या समाधान र सीमाङ्कन हेरफेरका लागि कार्यविधि तयार पार्न गठित कार्यदल र सरकारबीच विहिबार गम्भीर छलफल हुने तयारी छ । विहिबार दिउँसो १ बजेलाई बैठक डाकिएको छ । यद्यपि, सत्ताधारी दलका कार्यदल सदस्यहरु बेपत्ता छन् । सवै विषय टुंगो लगाउने गरी बुधवार आफ्ना दलका शीर्ष नेताहरुसंग छलफल गर्ने बताएर मंगलबारको बैठक सक्काएका सत्ताधारीहरुको चालामालाले निर्णय तहको छलफल हुने सम्भावना न्यून छ । मंगलबार बैठकबाट निस्कँदा गृहमन्त्री शक् ... बाँकी अंश»